Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Miomana amin'ny fikomian'ny rivodoza Henri i Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra manodidina ny 75mph ankehitriny i Henri dia antenaina hamely an'i Long Island na atsimon'ny New England amin'ny alahady.
Tafio-drivotra tropikaly Henri no navadika ho rivodoza.
Nisy ny fampitandremana mafy momba ny toetrandro manerana an'i avaratra atsinanan'i Etazonia.
Andrasana ny rotsakorana mavesatra, miaraka amin'ny fampitandreman'ny National Hurricane Center ho an'ny rotsakorana hatramin'ny 10 santimetatra amin'ny faritra sasany.
Tafio-drivotra tropikaly Henri dia novaina androany ho amin'ny haavon'ny rivo-doza avy amin'ny Ivotoerana Rivo-doza Amerikanina. Henri dia nohavaozina avy tamin'ny tafio-drivotra tropikaly ho rivodoza ny asabotsy maraina, ary antenaina hidina an-tanety amin'ny alahady.
Mpitantana ny FEMA, Deanne Criswell
Nisy ny fampitandremana mafy momba ny toetrandro nanerana an'i avaratra atsinanan'i Etazonia, satria ny rivodoza Henri dia mandeha any avaratra andrefan'ny Atlantika.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra manodidina ny 75mph ankehitriny i Henri dia antenaina fa hamely an'i Long Island na atsimon'ny New England rahampitso.
Raha namely an'i Long Island izy, dia io no rivo-doza voalohany nitokona tao nanomboka tamin'i Gloria tamin'ny 1985. Raha tonga any New England izy io, dia io no rivo-doza voalohany nanomboka an'i Bob tamin'ny 1991, izay namono olona 15 ary namono volavola mitentina 1.5 tapitrisa dolara mahery ho onitra.
Henri dia mitondra rivotra hafainganam-pandeha manodidina ny 75km (120kph) mankany Etazonia, ary antenaina fa hatanjaka izy rehefa manakaiky ny tany. Nisy ny fampitandremana tamin'ny tafiotra mahery vaika avy tany New York ka hatrany Massachusetts. Ny governora any amin'ireny fanjakana ireny, ary koa ao Connecticut sy Rhode Island, dia nanoro hevitra ny amin'ny fandehanana tsy ilaina. Connecticut sy Massachusetts koa dia niantso ny mpikambana ao amin'ny National Guard hiasa am-perinasa hiomanana amin'ny fahatongavan'i Henri.
Andrasana ny rotsakorana mavesatra, miaraka amin'ny National Hurricane Center fampitandremana ny rotsak'orana hatramin'ny 10 santimetatra amin'ny faritra sasany. "Ny oram-be mivatravatra avy any Henri dia mety hiteraka tondra-drano, tanàn-dehibe ary renirano kely," hoy ny torohevitra, ary nilaza fa "tadio na roa" no mety hitranga any New England amin'ny alahady.
New England dia efa nofafazana taorian'ny oram-be nandritra ny herinandro maromaro. Agence Federal Management Management Agency (FEMA) Nilaza ny mpitantana Deanne Criswell tamin'ny sabotsy fa ireo fepetra feno rano ireo dia midika fa afaka mamongotra mora foana ireo hazo sy tariby mitondra herinaratra i Henri, mety hiteraka fahatapahana andro maromaro.
"Ho hitantsika ny fahatapahan'ny herinaratra, hahita ireo hazo torotoro isika, ary na dia efa lasa aza ny tafio-drivotra, dia eo ihany ny fandrahonana ho faty sy rantsana hianjera," hoy izy.